Shaqada qofka markaas loo billaabo waxaa loogu tala galay adigaaga waqti dheer ahaa shaqo la’aanta, ama Swiidhan yimid goor dhaw oo ka qeyb qaata etableringsprogrammet. Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid. Waxaa sidoo kale lagaaga baahanyahay inaad buuxiso wax ka mid ah arrimahan.
Waxaad, xiriirradaada ama adigoo annaga na soo maraya, ku heleysaa shaqabixiye doonaya in uu ku shaqaaleysiiyo.
Nystartsjobb - när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid
Isu geegey waqtigi aad suuqa shaqada ka maqneyd adigoo buuxinaya foomka ”Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb”. Ku dhameystir caddeymihi laga yaabo in ay jiraa, tusaale ahaan kuwan Försäkringskassan.
Foom: Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb
Foomka isu geegeynta iyo wixii caddeymo ah ee laga yaabo in ay jiraan annaga ayaad noo keeneysaa ka dib marka uu codsiga shaqabixiyuhu na soo gaaro.
Haddii aad Swiidhan ku cusubtihid waxaad u baahantahay in aad Laanta socdaalka ka haysatid sharci degganaasho ama kaar joogitaan.
Waxaan go’aan ka gaareynaa in shaqabixiyuhu uu kugu shaqaaleysiin karyo shaqo markaas la billaabay.